Tao anatin` ny 24 ora lasa izay dia tranga 47 no voamarina fa mitondra ny tsimok`aretina, hoy ny tomponandraikitrin` ny fahasalamam-bahoaka any an-toerana. Ny ankamaroan' izy ireo dia sinoa miverina an-tanindrazana. Ankoatr'izay, nitombo efatra indray no namoy ny ainy vokatrin` ny aretina ka ny telo tao Hubei, faritra voalohany voan' ny COVID-19. Na dia izany nanala ireo ampahana fepetra hentitra napetraka nandritra ny fiatrehana ny aretina ny fanjakana sinoa omaly. Saingy mbola misy kosa fepetra tsy maintsy tazomina indrindra ao Hubei. Efa nanambara ny mpitondra, ny talata lasa teo fa tsy mihatra intsony ny fihibohana napetraka tamin` ireo mponina 50 tapitrisa nanomboka ny volana jona. Afaka mifamezivezy izy ireo raha toa ka tsy ahiana ny fahasalamany. Efa misy seranam-piaramanidina sy gara nisokatra. Ireo fianarana kosa dia mbola mikatona. Ho an`i Wuhan manokana kosa dia tsy maintsy miandry hatramin` ny 8 aprily izao vao afaka mifamezivezy ny mponina ao aminy.